अस्थिरता के हो? - काजु
घर » घर » अस्थिरता के हो?
ट्याग: Bitcoin, BVOL, ethereum, Litecoin, अस्थिरता
वित्त मा, अस्थिरता वर्णन गर्दछ कति चाँडो र कति सम्पत्तिको मूल्य परिवर्तन हुन्छ। यो सामान्यतया को हिसाबमा गणना गरिन्छ मानक विचलन निश्चित अवधिमा सम्पत्तिको वार्षिक प्रतिफल। किनकि यो गति र मूल्य परिवर्तनको डिग्री को एक मापन हो, अस्थिरता अक्सर कुनै पनि सम्पत्ति को लागी लगानी जोखिम को एक प्रभावी उपाय को रूप मा प्रयोग गरीन्छ।
परम्परागत बजारहरूमा अस्थिरता
अस्थिरता स्टक बजारमा प्राय जसो छलफल गरिन्छ, र जोखिमको आकलनमा यसको महत्त्वको कारण, त्यहाँ परम्परागत बजारमा स्थापित प्रणालीहरू छन् (भनिन्छ अस्थिरता सूचकांक) मापन गर्न र सम्भावित रूपमा भविष्यको अस्थिरता स्तरहरूको अनुमान गर्न। उदाहरण को लागी, शिकागो बोर्ड विकल्प एक्सचेन्ज को अस्थिरता सूचकांक (VIX) अमेरिकी शेयर बजार मा प्रयोग गरीन्छ। VIX सूचकांकले &०-दिन विन्डोमा बजार अस्थिरता नाप्न S&P 500 शेयर विकल्प मूल्यहरू प्रयोग गर्दछ।
जबकि प्राय जसो इक्विटीसँग सम्बन्धित छ, अन्य पारम्परिक बजारहरूमा पनि अस्थिरता महत्त्वपूर्ण छ। २०१ 2014 मा, सीबीओईले १० बर्षे अमेरिकी ट्रेजरीहरूको लागि नयाँ अस्थिरता सूचकांक सुरू गर्‍यो जसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास र बन्धन बजारमा जोखिमलाई नाप्छ। जबकि यसलाई मापन गर्न केहि उपकरणहरू अवस्थित छन्, विदेशी विनिमय बजारमा अवसरहरूको मूल्या for्कनका लागि अस्थिरता पनि एक महत्त्वपूर्ण घटक हो।
क्रिप्टोकरन्सी बजारहरूमा अस्थिरता
अन्य बजारहरूमा जस्तै, अस्थिरता क्रिप्टोकरन्सी बजारहरूमा जोखिमको एक महत्त्वपूर्ण उपाय हो।
तिनीहरूको डिजिटल प्रकृतिको कारण, उनीहरूको हालको निम्न स्तरको नियमन (पवित्र विकेन्द्रीकरण) र बजारको सानो आकार, क्रिप्टो करन्सीहरू अन्य अन्य सम्पत्ति वर्गहरू भन्दा धेरै अस्थिर छन्।
यो उच्च स्तरको अस्थिरता क्रिप्टोकरन्सी लगानीमा व्यापक ब्याज बढाउनको लागि आंशिक रूपमा जिम्मेवार छ किनकि यसले केही लगानीकर्ताहरूलाई तुलनात्मक रूपमा छोटो अवधिमा ठूलो रिटर्न महसुस गर्न अनुमति दिएको छ। अधिक नियमनको साथ व्यापक बजार अपनाउने र वृद्धिको परिणाम स्वरूप दीर्घकालीन अवधिमा क्रिप्टोकुरेन्सी बजारहरूमा अस्थिरता कम हुने सम्भावना छ।
क्रिप्टोकुरेन्सी बजारहरू परिपक्व भएपछि लगानीकर्ताहरू उनीहरूको अस्थिरता नाप्न अझ बढी इच्छुक भए। यस कारणका लागि, अस्थिरता सूचकहरू अब केहि प्रमुख क्रिप्टोकरन्सीहरूको लागि अवस्थित छन्। सब भन्दा उल्लेखनीय Bitcoin अस्थिरता सूचकांक (BVOL) हो, तर Ethereum र litecoin सहित अन्य cryptocurrency बजारहरू ट्र्याक गर्न उस्तै उदासीनता सूचकहरू छन्।
अघिल्लो लेखक्रिप्टोकुरेन्सीहरूको संसारमा फ्लिपपनिंग के हो?
अर्को लेखइथरियम भनेको के हो?
इथरियम भनेको के हो?